शिल्पालाई सम्बोधन गर्दै मध्यरातमा छविले लेखे यस्तो स्टाटस, अब के हुन्छ ? (स्टाटससहित) – Jaljala Online
बिनु सुवेदी । त्यो दिन कुलपूजा थियो। स्कुलबाट सीधै घर आउन पर्दैनथ्यो। खेल्दै खेल्दै कुलदेवताको थानसम्म पुग्ने। टपरीमा खिर खाने र खेल्दै खेल्दै घर फर्किने। यो लेख हामीले सेतोपाटी अनलाइनबाट लिएका हौ । खिर पनि खान पाइने र घरमा ढिलो जान पाइने भएपछि मलाई कुलपूजा हप्तैपिच्छे भइदिए पनि हुन्थ्यो जस्तो लागिरहन्थ्यो। कुलपूजाको प्रसाद खान जाने […]
Posted on July 8, 2019 Author Jaljala Online
असार २३, काठमाडौं । पाकिस्तानमा पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज शरिफलाई सुनाइएको सजायमाथि एकपटक पुनः राजनीति तातेको छ । उनकी छोरी मरियम नवाजले न्यायाधीसमाथि दबाबमा सजाय दिएको आरोप लगाएकी छिन् । यद्यपि, पाकिस्तानमा भ्रष्टाचारको मामलाको सुनुवाई गर्ने इस्लामाबादको जवाफदेही अदालतका न्यायाधीस मोहम्मद अरशद मलिकले मरियम नवाजको यी आरोपलाई झुटो बताएका छन् । मरियमले ‘न्यायाधीस मलिकले नवाज शरिफविरुद्ध […]
आज कस्तो हुन्छ वर्षा? यस्तो छ माैसम महाशाखाकाे अनुमान